Hoggaamiyihii kooxda Boko Xaraam oo geeriyooday | Xaysimo
Home War Hoggaamiyihii kooxda Boko Xaraam oo geeriyooday
Codka oo aanan la ogeyn xilligga lasoo duubay ayaa waxaa loo maleynayaa in uu yahay hoggaamiyaha garabka la baxay dowladda islaamka ee galbeedka Afrika (Iswap ) Abu Muscab Al Barnawi oo sheegayo “In Abuubakar Shekau oo isagu si deg deg ah uu isku qarxiyay kadib markii uu isku xiray waxyaabo qarxa.”
“Shekau ayaa doorbiday in iska takhaluso intii uu isaga lagu bahddili lahaa dunida” ayaa lagu yiri codka.
Abuubakar Shekau ayaa la rumeysan yahay in uu jiray da’da 40, wuxuu kasoo dhex muuqanayay muuqaallo uu uga hadlaya ololaha kooxda.
“Waxaan ku raaxeystaa dilka sida aan ugu raaxeysto marka aan gowracayo digaagta ama Idaha” ayuu yiri mar uu kasoo muuqday muuqaal la baahiyay 2012-kii.
Wixii xilliggaas ka dambeeyay, Mareykanka wuxuu ku dhawaaqay in Shekau uu yahay ‘argagixiso caalami ah’, waxaa uu dul digay madaxiisa $7 milyan oo doolar.